एभरेष्ट बैंकको नाफा १८ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
एभरेष्ट बैंकको नाफा १८ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७६, बिहीबार ११:५०
एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकले ३ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकले नाफामा १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
बैंकले खुद नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, खुद ब्याज आम्दानी लगायत महत्वपूर्ण सूचकहरुमा पनि राम्रो सुधार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १२ महिनाको अवधिसम्ममा बैंकले १ खर्ब २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो भने कर्जा प्रवाहमा १६ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको १२ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १६ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ ।